Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo Faahfaahinta Dagaaladii Ugu Dambeeyay ee CWXO uu ku Qaado Cadawga
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo Faahfaahinta Dagaaladii Ugu Dambeeyay ee CWXO uu ku Qaado Cadawga
Wararka aan ka helayno wadanka Ogadenia gaar ahaan Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa ka waramay dagaalo si isdaba joog ah usocda oo N/hurayaasha CWXO ku beegsanayaan ciidanka gumaysiga Itobiya ee ku sugan dalka Ogadenia. Dagaaladan ugu dambeeyay een helnay warbixintooda oo socday 5-11 bishan ayaa ciidanka gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare laxaadleh oo isgu jiran 42 Askari oo ka bakhtiyay kuwaasoo darajooyin kala duwan lahaa iyo dhaawac fara badan oy kala tageen goobaha dagaalka. Dagaalada ayaa waxaa ka mid ahaa kuwo aan wali laga helin faahfaahinta rasmi ah, waxayna u dhaceen sidan.
5/1/15 Ceelo-obo oo Dagmada Galaalshe ee Gobolka Nogob katirsan dagaalm xoogan oo cwxo iyo kuwa wayaanaha ku dhex maray waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 9 askari 8 kalana waa lagaga dhaawacay.
5/1/15 Ceelo-obo oo Galaalshe katirsan dagaal rogaal celin ah oo kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 7 askari 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
5/1/15 Duudcade oo dagmada Gunagado ee Gobolka Jarar karitsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga Etiopia lagaga dilay 7 askari 9 kalana waa lagaga dhaawacay.
5/1/15 Wacanrida oo dagmada Garbo ee Gobolka Nogob katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
6/1/15 Inahuruuf oo dagmada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob katirsan dagaal xoogan oo kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga ee sida sharci darada ah kujooga ogadenia lagu gaadhsiiyay khasaare aan wali lasoo faahfaahinin.
7/1/15 Dhagaxbuur weerar mir ah oo ay CWXO ku qaadeen waxay kudha kaga jareen 5 kamid ah ciidanka wayaanaha 6 kalana way ku dhaawaceen.
7/1/15 Ciidadowga oo dagmada Sagag ee Gobolka Nogob katirsan dagaal ka dhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 4 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
9/1/15 Ceel-jiir oo dagmada Dhagaxmadow katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada doolka iyo dulmiga kujooga ciida ogadenia ee wayaanaha lagaga dilay 7 askari 9 kalana waa lagaga dhaawacay.
11/1/15 jugle oo dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay katirsan dagaal aad u culus oo CWXO iyo kuwa gumaysiga ku dhexmaray waxaa ciidanka wayaanahalagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa wali lahelin.